Tag: upsell customers | Martech Zone
Ithegi: abathengi abathengisayo
Amaqhosha asixhenxe kuThengiso lweShishini elincinci kunye nokuThengisa
NgoLwesithathu, Septemba 17, 2014 NgoLwesibini, Septemba 16, 2014 Douglas Karr
Ngelixa sincedisa amashishini amakhulu ngokuthengisa kunye nemizamo yokuthengisa, sili shishini elincinci ngokwethu. Oko kuthetha ukuba sinezixhobo ezinqongopheleyo kwaye njengoko abathengi beshiya, kubalulekile ukuba sibe nabanye abathengi abathatha indawo yabo. Oku kusenza sikwazi ukulawula ukuhamba kwethu kwemali kunye nokugcina izibane zikhanya! Yimeko enzima, nangona kunjalo. Rhoqo siba nenyanga okanye ezimbini ukulungiselela ukuhamba komthengi omnye kunye nokukhwela kwi